Ama-Internet Ministries - Amasonto KaKristu ... Bangobani laba bantu?
Amasonto kaKristu ... Bangobani laba bantu?
NguJoe R. Barnett
Cishe uzwe ngamasonto kaKristu. Futhi mhlawumbe uke wabuza, "Bangobani laba bantu? Yini-uma kukhona - ibahlukanisa namakhulu eminye amabandla emhlabeni?
"Isiphi isimo sabo semlando?"
"Bangaki amalungu abanayo?"
"Uyini umlayezo wabo?"
"Bakholelwa ngani ngeBhayibheli?
Emhlabeni wonke kunamabandla e-20,000 amasonto kaKristu anenani eliphelele lama-21 / 2 kuya ku-3 million amalungu ngamunye. Kunamabandla amancane, anamalungu ambalwa nje - futhi amakhulu amakhulu akhiwa ngamalungu ayizinkulungwane eziningana.
Amandla amakhulu okubalwa kwamanani emasontweni kaKristu ase eningizimu ye-United States lapho, ngokwesibonelo, kunamalungu e-40,000 kwamanye amabandla e-135 eNashville, eTennessee. Noma, e-Dallas, eTexas, lapho kunamalungu angama-36,000 emabandleni e-69. Emazweni anjengoTennessee, eTexas, Oklahoma, Alabama, eKentucky - nabanye - kukhona isonto likaKristu cishe kuwo wonke amadolobha, kungakhathaliseki ukuthi kunkulu kangakanani noma kuncane kangakanani.
Ngenkathi isibalo samabandla namalungu akuyona iningi kwezinye izindawo, kunamasonto kaKristu kuwo wonke amazwe e-United States nakwamanye amazwe e-109.
Abantu bokubuyisa uMoya
Amalungu amasonto kaKristu angabantu bomoya wokubuyisela - bafuna ukubuyisela esikhathini sethu isonto lokuqala laseTestamente elisha.
UDkt. Hans Kung, isazi sezenkolo esaziwayo saseYurophu, washicilela incwadi eminyakeni embalwa eyedlule ethi Inhlangano. UDkt Kung waqamba iqiniso lokuthi isonto elisungulwe selilahlekelwe indlela yalo; uye wahlushwa isiko; kuyehluleka ukuba yilokho uKristu ahlele ukuthi kufanele kube khona.
Impendulo kuphela, ngokusho kukaDkt Kung, ukubuyela emuva emiBhalweni ukuze ubone ukuthi isonto lisekuqaleni, bese libuyela emuva ngekhulu lama-20 isisekelo sesonto lokuqala. Yilokho amasonto kaKristu afuna ukukwenza.
Engxenyeni yokugcina yekhulu le-18th, amadoda asezinhlobonhlobo ezahlukene, efundela ngokuzimela, ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba, aqala ukubuza:
-Kungani ungabuyeli emuva kwezenkolo ukuze kube nesonto lekhulu lokuqala?
-Kungani ningathathi iBhayibheli kuphela futhi niphinde niqhubeke "niqinile ngokufundisa kwabaphostoli ..." (IZenzo 2: 42)?
-Kungani ungahlwanyeli imbewu efanayo (iZwi likaNkulunkulu, uLuka 8: 11), lawo maKristu ekhulu lokuqala atshalwa, abe ngamaKristu kuphela, njengoba ayekhona?
Babecela wonke umuntu ukuba alahle amahlelo, ukulahlekelwa izinkolelo zabantu, nokulandela kuphela iBhayibheli.
Bafundisa ukuthi akukho lutho oludingekayo kubantu njengezenzo zokholo ngaphandle kwalokho okubonakala emibhalweni.
Bagcizelela ukuthi ukubuyela eBhayibhelini akusho ukusungulwa kwesinye isonto, kodwa kunalokho kubuyela esontweni sokuqala.
Amalungu emasonto kaKristu ajabule ngale ndlela. NgeBhayibheli njengesiqondiso sethu kuphela sifuna ukuthola ukuthi isonto lokuqala lalingani futhi libuyisele kahle.
Asiboni lokhu njengokuziqhenya, kodwa okuphambene kakhulu. Sisindise ukuthi asinalo ilungelo lokucela ukuhlonipha kwamadoda enhlanganweni yabantu-kodwa kuphela ilungelo lokubiza amadoda ukuba alandele uhlelo lukaNkulunkulu.
Ngenxa yalesi sizathu, asinasithakazelo emithethweni eyenziwe ngabantu, kodwa nje ngesibonelo seTestamente Elisha. Asizikholelwa ukuthi siyihlelo - hhayi njengamaKatolika, amaProthestani, noma amaJuda - kodwa nje njengamalungu esonto uJesu asungula nokuthi afe ngalo.
Futhi lokho, ngenxa yalokho, yingakho sigqoka igama lakhe. Igama elithi "isonto likaKristu" alisetshenzisiwe njengegama elibizwa ngamabandla, kepha esikhundleni segama elichazayo elibonisa ukuthi isonto lingelakaKristu.
Siyaqaphela ukwehluleka kwethu siqu kanye nobuthakathaka bethu - futhi lokhu yisona isizathu esiningi sokufuna ukulandela ngokucophelela uhlelo oluphelele futhi oluphelele uNkulunkulu analo ngesonto.
Ubunye Ngokusekelwe EBhayibhelini
Njengoba uNkulunkulu enikeze "amandla onke" kuKristu (uMathewu 28: 18), futhi njengoba ekhonza njengomkhulumeli kaNkulunkulu namhlanje (Hebheru 1: 1,2), ukukholwa kwethu ukuthi nguKristu kuphela onamandla okusho ukuthi ibandla liyini nokuthi yini kufanele sifundise.
Futhi njengoba iTestamente Elisha kuphela ibeka iziyalezo zikaKristu kubafundi bakhe, yiyo kuphela okufanele ibe yisisekelo sayo yonke imfundiso yenkolo nokuziphatha. Lokhu kuyisisekelo namalungu amabandla kaKristu. Sikholelwa ukuthi ukufundisa iTestamente Elisha ngaphandle kokuguqulwa yindlela kuphela yokuhola amadoda nabesifazane ukuba babe ngamaKristu.
Sikholwa ukuthi ukuhlanganyela ngokwenkolo kubi. UJesu wathandazela ubunye (uJohn 17). Futhi kamuva, umphostoli uPawulu wanxusa labo abahlukaniswe ukuba bahlangane noKristu (1 Corinthians 1).
Sikholelwa ukuthi yindlela kuphela yokufinyelela ubumbano ngokubuyela eBhayibhelini. Ukuncintisana akukwazi ukuletha ubunye. Futhi ngokuqinisekile akekho umuntu, noma iqembu labantu, onelungelo lokwakha imithethwana yemithetho okufanele wonke umuntu ahlale kuyo. Kodwa kulungile ngokuphelele ukusho, "Masihlanganise ngokulandela iBhayibheli kuphela." Lokhu kulungile. Lokhu kuphephile. Lokhu kulungile.
Ngakho amabandla kaKristu acela ubunye benkolo esekelwe eBhayibhelini. Sikholelwa ukuthi ukubhalisela kunoma yikuphi ukukholwa ngaphandle kweTestamentamente Elisha, ukwenqaba ukulalela noma yikuphi umyalo weTestamente Elisha, noma ukulandela noma yimuphi umkhuba ongagciniwe iTestamente Elisha ukufaka noma ukukhipha ezimfundisweni zikaNkulunkulu. Futhi kokubili izithasiselo nokukhupha zilahlwa eBhayibhelini (Galathiya 1: 6-9; IsAmbulo 22: 18,19).
Yingakho iTestamente Elisha kuphela umthetho wokukholwa nomkhuba esinawo emasontweni kaKristu.
Ibandla ngalinye elizilawulayo
Amasonto kaKristu awayekho lutho lwezinhlangano zezinhlangano zanamuhla. Awekho amabhodi alawulayo - noma isifunda, isifunda, isizwe noma amazwe angaphandle - ayikho indlunkulu yasemhlabeni futhi ayikho inhlangano eyenzelwe abantu.
Ibandla ngalinye lizimele (lizibusa) futhi lizimele kuzo zonke ezinye amabandla. I-tie kuphela ehlanganisa amabandla amaningi ndawonye ukuthembela okuvamile kuKristu neBhayibheli.
Ayikho imihlangano, imihlangano yonyaka, noma izincwadi ezisemthethweni. Amabandla asebenzisana ekusekeleni amakhaya abantwana, amakhaya asebekhulile, umsebenzi wezithunywa, njll. Nokho, ukubamba iqhaza kuyisibopho ngokuzithandela ebandleni ngalinye futhi akukho muntu noma iqembu elikhulumela izinqubomgomo noma ukwenza izinqumo kwamanye amabandla.
Ibandla ngalinye libuswa endaweni yangakini ngabadala abaningi abakhethwe phakathi kwamalungu. Lawa angamadoda ahlangabezana neziqu ezithile zehhovisi elinikwe ku-1 Timothy 3 noThithu 1.
Kukhona namdikoni ebandleni ngalinye. Lezi kumele zihlangabezane neziqu zeBhayibheli ze-1 Timothy 3. I
Ukukhulekela emasontweni kaKristu kuhlanganisa ezintweni ezinhlanu, okufana naso esontweni lekhulu lokuqala. Sikholelwa ukuthi iphethini ibalulekile. UJesu wathi, "UNkulunkulu ungumoya, futhi labo abamkhulekelayo kumelwe bakhulekele ngomoya nangeqiniso" (John 4: 24). Kusuka esitatimendeni sifunda izinto ezintathu:
I-1) Ukukhulekela kwethu kufanele kuqondiswe entweni efanele ... uNkulunkulu;
I-2) Kumelwe ifakwe umoya oqondile;
I-3) Kumele kube ngokuvumelana neqiniso.
Ukukhulekela uNkulunkulu ngokweqiniso ukukumkhulekela ngokweZwi lakhe, ngoba iZwi lakhe liyiqiniso (uJohn 17: 17). Ngakho-ke, akumelwe sikhiphe noma iyiphi into etholakala eZwini lakhe, futhi akumelwe sihlanganise noma iyiphi into engatholakali eZwini lakhe.
Endabeni zenkolo kufanele sihambe ngokholo (2 Corinthians 5: 7). Njengoba ukholo luza ngokuzwa iZwi likaNkulunkulu (Roma 10: 17), noma yini engagunyaziwe yiBhayibheli ayikwazi ukukholwa ngokholo ... futhi noma yini engekho yokholo yisono (Roma 14: 23).
Izinto eziyisihlanu zokukhulekela ezazigcinwe esontweni lekhulu lokuqala zazihlabelela, zithandaza, zishumayela, zinika, futhi zidla isidlo seNkosi.
Uma ujwayele amasonto kaKristu cishe uyazi ukuthi kulezi zici ezimbili ukuziphatha kwethu kuhlukile kunalokho kwamaqembu amaningi enkolo. Ngakho ngivumela ukuthi ngigxile kulaba ababili, futhi ngitshele izizathu zethu ngalokho esikwenzayo.
Enye yezinto abantu abaqaphele njalo ngamasonto kaKristu ukuthi sihlabelela ngaphandle kokusetshenziswa kwemishini yomculo - ukuhlabelela i-cappella ngumculo kuphela osetshenziselwa ekukhulekeleni kwethu.
Ngokusho nje, nasi isizathu: sifuna ukukhulekela ngokulandela imiyalo yeTestamente Elisha. ITheTestamente Elisha iphuma emculweni wezinsimbi, ngakho-ke, sikholelwa ukuthi kulungile futhi kuphephile ukuyiyeka, futhi. Uma sisebenzisa isitsha sokwemishini kumele senze kanjalo ngaphandle kwegunya leTestamente Elisha.
Kukhona amavesi e-8 kuphela eTestamenteni Elisha mayelana nomculo wokukhulekela. Lapha kukhona:
"Kwathi sebehlabelele iculo, baphuma baya eNtabeni Yeminqumo" (uMathewu 26: 30).
"cishe phakathi kwamabili uPawuli noSila babethandaza behlabelela izingoma kuNkulunkulu ..." (IzEnzo 16: 25).
"Ngakho-ke ngizokudumisa phakathi kwabezizwe, ngihlabelele igama lakho" (Roma 15: 9).
"Ngizohlabelela ngomoya futhi ngizohlabelela ngengqondo futhi" (1 Corinthians 14: 15).
"... nigcwaliswe ngoMoya, nikhulume ngamahubo nangezingoma nangezingoma ezingokomoya, nihlabelele futhi nidumise iNkosi ngenhliziyo yenu yonke" (Efesu 5: 18,19).
"Izwi likaKristu mahlale kini ngokucebile, njengalokhu nifundisa futhi niyalana ngakho konke ukuhlakanipha, futhi nihlabelela amahubo nezinoma nezingoma ezingokomoya ngokubonga ezinhliziyweni zenu kuNkulunkulu" (Kolose 3: 16).
"Ngizakumemezela igama lakho kubafowethu, phakathi kwebandla ngizokuhlabelela indumiso kuwe" (Hebheru 2: 12).
"Ngabe ukhona yini ophakathi kwenu ohluphekayo? Ake athandaze, ingabe kukhona othokozayo?
Insimbi yomculo ingekho engekho kulezi zindatshana.
Ngokomlando, ukubukeka kokuqala komculo wezinsimbi ekukhulekeleni kwesonto kwakungakaze kube yikhulu lekhulu lesithupha AD, futhi kwakungekho nokusebenza okujwayelekile kuze kube sekupheleni kwekhulu lesishiyagalombili.
Umculo wezingoma wawuphikiswa ngokuqinile ngabaholi benkolo abanjengoJohn Calvin, uJohn Wesley noCharles Spurgeon ngenxa yokungabikho eTestamenteni Elisha.
Ukugcinwa kwamasonto onke ngesidlo seNkosi
Enye indawo lapho uke wazi khona umehluko phakathi kwamasonto kaKristu namanye amaqembu enkolo aseSidlo SeNkosi. Lesi sidlo sakusihlwa sasikhululwa nguJesu ngobusuku bokukhaphela kwakhe (uMathewu 26: 26-28). Kuyabonakala ngamaKristu ekukhunjweni kokufa kweNkosi (1 Corinthians 11: 24,25). Izifanekiselo - isinkwa esingenamvubelo nezithelo zomvini - zifanekisela umzimba negazi likaJesu (1 Corinthians 10: 16).
Amasonto kaKristu ahlukile kwabaningi ngokuthi sigcina iSidlo SeNkosi Sakusihlwa ngosuku lokuqala lweviki. Futhi, isizathu sethu sibeka ekuzimiseleni kwethu ukulandela imfundiso yeTestamente Elisha. Lithi, ngokuchaza umkhuba wesonto lokuqala, "Ngosuku lokuqala lwesonto ... abafundi bahlangana ukuphuka isinkwa ..." (IzEnzo 20: 7).
Abanye baye baphikisa ukuthi umbhalo awucacisi usuku lokuqala lweviki. Lokhu kuyiqiniso - njengoba nje umyalo wokugcina iSabatha awuzange ucacise zonke iSabatha. Umyalo wawumane nje, "khumbula usuku lwesabatha ukuligcina lingcwele" (Eksodusi 20: 8). AmaJuda ayaqonda ukuthi ukusho njalo ngeSabatha. Kubonakala kithi ukuthi ngokucabanga okufanayo "usuku lokuqala lwesonto" kusho usuku lokuqala lweviki.
Futhi, siyazi kusukela kwababhali-mlando abahlonishwayo njengoNeander no-Eusebius ukuthi amaKristu kulawo makhulwini okuqala athatha iSidlo SeNkosi njalo ngeSonto.
Mhlawumbe uyazibuza, "Umuntu uba kanjani ilungu lebandla likaKristu?" Iyini imigomo yobulungu?
Amasonto kaKristu akhulumi ngobulungu ngokwemigomo ethile okumelwe ilandelwe ukwamukelwa okuvunyelwe esontweni. ITestamente Elisha linikeza izinyathelo ezithile ezithathwe abantu ngalolo suku ukuba babe ngamaKristu. Lapho umuntu eba ngumKristu ngokuzenzekelayo wayeyilungu lesonto.
Kuyafana namasonto kaKristu namuhla. Ayikho iqoqo leminye yemithetho noma imikhosi okufanele ilandelwe ukuze ihanjiswe esontweni. Uma umuntu eba ngumKristu yena, ngesikhathi esifanayo, uba yilungu lebandla. Awekho amanyathelo okuqhubekayo adingekayo ukuze afanelekele ubulungu besonto.
Ngosuku lokuqala lokukhona kwesonto labo abaphendukayo futhi babhapathizwa basindiswa (Izenzo 2: 38). Futhi kusukela ngalolo suku phambili bonke labo abasindisiwe bangezelwa esontweni (Izenzo 2: 47). Ngokwalesi vesi (IzEnzo 2: 47) kwakunguNkulunkulu owafaka ukungeza. Ngakho-ke, lapho sifuna ukulandela leli phethini, asivoteli abantu esontweni noma sibacindezela ngokusebenzisa uchungechunge oludingekayo lwezifundo. Asinelungelo lokufuna noma yini ngaphandle kokulalela kwabo okulalelayo kuMsindisi.
Izimo zokuxolelwa ezifundiswa eTestamente Elisha:
1) Omunye kufanele azwe ivangeli, ngoba "ukukholwa kuvela ngokuzwa izwi likaNkulunkulu" (Roma 10: 17).
2) Umuntu kumele akholelwe, ngoba "ngaphandle kokholo akunakwenzeka ukujabulisa uNkulunkulu" (Hebheru 11: 6).
I-3) Umuntu kufanele aphenduke ezonweni ezedlule, ngoba uNkulunkulu "uyala bonke abantu, noma kuphi ukuphenduka" (IzEnzo 17: 30).
4) Omunye kufanele avume ukuthi uJesu uyiNkosi, ngoba wathi, "Lowo ongivuma phambi kwabantu, nami ngizovuma phambi kukababa osezulwini" (uMathewu 10: 32).
I-5) Futhi umuntu kufanele abhapathizwe ngenxa yokuthethelelwa kwezono, ngoba uPetru wathi, "Phendukani futhi nibhapathizwe yilowo nalowo egameni likaJesu Kristu ngokuthethelelwa kwezono zenu ..." (IzEnzo 2: 38) .
Amasonto kaKristu anedumela lokubeka ukucindezeleka okukhulu ngesidingo sokubhapathizwa. Kodwa-ke, asigcizeleli ubhapathizo ngokuthi "umthetho wesonto," kodwa njengomyalo kaKristu. Ithempeli Elisha lifundisa ubhapathizo njengesenzo esibalulekile ekusindisweni (uMarku 16: 16; IzEnzo 2: 38; Izenzo 22: 16).
Asisebenzisi ubhapathizo lwezinsana ngoba ubhapathizo lweTestamente Elisha lusezoni kuphela eziphendukela eNkosini enkolelweni nasekukholweni. Usana alukho isono sokuphenduka, futhi alukwazi ukufaneleka njengokholo.
Uhlobo olulodwa lokubhapathizwa esilwenza emasontweni kaKristu lokucwiliswa. Igama lesiGreki elivela kulo igama elithi ubhapathiza lisho ukuthi "ukucwilisa, ukucwilisa, ukuhlanganisa, ukuphonsa." Futhi imiBhalo isho ngaso sonke isikhathi kubhapathizo njengokungcwatshwa (IzEnzo 8: 35-39; AmaRoma 6: 3,4; AbaseKolose 2: 12).
Ubhapathizo lubaluleke kakhulu ngoba iTestamente Elisha libeka izinhloso ezilandelayo:
1) Kungukungena embusweni (uJohn 3: 5).
I-2) Ukuxhumana negazi likaKristu (amaRoma 6: 3,4).
3) Kumelwe ungene kuKristu (Galathiya 3: 27).
I-4) Yisindiso (uMark 16: 16; 1 Peter 3: 21).
I-5) Kungenxa yokuxolelwa kwezono (Izenzo 2: 38).
I-6) Ukuhlanza izono (Izenzo 22: 16).
I-7) Kumelwe ungene esontweni (1 Corinthians 12: 13; Abe-Efesu 1: 23).
Njengoba uKristu efela izono zezwe lonke futhi isimemezelo sokuhlanganyela emseni wakhe osindisayo sivulekele wonke umuntu (IzEnzo 10: 34,35; IsAmbulo 22: 17), asikholelwa ukuthi noma ngubani oye wabikezelwa kusindiso noma ukulahlwa. Abanye bayokhetha ukuza kuKristu ngokukholwa nokulalela futhi bayakusindiswa. Abanye bayonqaba isicelo sakhe futhi balahlwe (Mark 16: 16). Lezi ngeke zilahleke ngoba zikhonjelwe ukulahlwa, kodwa ngoba yileyo ndlela abayikhetha ngayo.
Noma ngabe ukuphi kulo mzuzwana, sithemba ukuthi uzothatha isinqumo sokwamukela insindiso eyanikezwa nguKristu - ukuthi uzozinikela ngokholo olulalelayo futhi ube yilungu lesonto lakhe.